नेपाल–बंगलादेश व्यापार | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण नेपाल–बंगलादेश व्यापार
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा बंगलादेशसँगको व्यापार महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । भारत तथा चीनपछि सबैभन्दा नजीकको र व्यापार सम्भावना भएको देश बंगलादेश हो । तर, जेजति मात्रामा व्यापार हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ सो अनुसार व्यापार भने भएको छैन । विगत केही वर्षयता भएको व्यापारको प्रवृत्ति कस्तो छ, तथ्यांकमा हेरौं ।
भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा बंगलादेशबाट रू. २ अर्ब ७३ करोड मूल्यको मालवस्तु आयात भएकोमा क्रमशः वृद्धि हुँदै आव २०७४/७५ मा रू. ४ अर्ब ७९ करोड मूल्यको आयात भएको देखिन्छ । तर, आव २०७४/७५ र आव २०७५/७६ को प्रथम १० महीनाको तुलना गर्दा गत आवको रू. ३ अर्ब ९९ करोड मूल्यको तुलनामा चालू आवमा रू. ३ अर्ब ७६ करोड मूल्यको आयात भई केही कमी आएको देखिन्छ ।
प्रमुख आयात हुने वस्तुहरू
बंगलादेशबाट आयात हुने वस्तुहरूमा भिनेगार र एसिटिक एसिडबाट बनाइएको भिनेगारका प्रतिस्थापकहरू, फड्केको वा कोरेको कपास, एकुमुलेटर तथा सेपरेटरहरू, औषधि, आलु, पीठोको रोटी, गुलियो पारेको पानी, विभिन्न पेपरहरू, कोको मिसाएका वा नमिसाएका चक्लेटहरू, पशुपक्षीको दाना, सनपाटको धागो, निटेड र क्रशिङबाट बनाएको टीसर्ट बनियान, कपासको अवशेष आदि रहेका छन् ।
विगत वर्षहरूमा बंगलादेशबाट आयात हुने वस्तुहरूमा सामान्यतः उतारचढाव आएको पाइन्छ । तर, प्रमुख तीनवस्तु भिनेगर र एसिटिक एसिडबाट बनाइएको भिनेगारका प्रतिस्थापकहरू, फड्केको वा कोरेको कपास र एकुमुलेटर तथा सेपेरेटरको आयात प्रायः उच्च नै रहेको पाइन्छ ।
विगत ४ वर्षमा बंगलादेशतर्फ भएको निर्यात हेर्दा उल्लेख्य रूपमा भिन्नता देखिने गरी वृद्धि वा ह्रास आएको देखिँदैन । आव २०७१÷७२ मा रू. १ अर्ब ८ करोड मूल्यको आयात भएकोमा त्यस पछिका वर्षहरूमा पनि करीब १ अर्बकै हाराहारी वा केही माथि हुने गरी निर्यात भएको देखिन्छ ।
प्रमुख निर्यात हुने वस्तुहरू
बंगलादेशतर्फ निर्यात हुने वस्तुहरूमा कोसा छोडाएको सुक्खा कोसे तरकारी (बोक्रा छोडाएको वा नछोडाएको वा दलेको वा नदलेको), कोसे सागपातहरूको ढुटो, चोकर वा अन्य अवशेष, विविध तयारी खाद्यपदार्थ, पुराना कपडाका धरा, डोरी आदि, त्रिपाल, चँदुवा, पर्दा आदि रहेका छन् ।
बंगलादेशतर्फ निर्यात हुने प्रमुख वस्तु भने कोसा छोडाएको सुक्खा कोसे तरकारी (बोक्रा छोडाएको वा नछोडाएको वा दलेको वा नदलेको) रहेको छ । यस प्रकार नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यको निर्यात यसैको (दाल तथा गेडागुडीको) हुने गरेको छ ।